अभिनेता सुशान्तसिंह आत्महत्यामा प्रेमिका रिया पक्राउ « Koshi Nepal
अभिनेता सुशान्तसिंह आत्महत्यामा प्रेमिका रिया पक्राउ
प्रकाशित मिति :9September, 2020 12:27 pm
काठमाडौं, २४ भदौं । बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपूत आत्महत्यामा सुशान्तकी प्रेमिका रिया चक्रवतीलाई कन्ट्रोल ब्युरो (एनसिबी) ले पक्राउ गरेको छ ।
प्रेमिका रियालाई लगातार तीन दिनसम्म सोधपुछ गरेपछि राजपूत आत्महत्याको ८४ दिनपछि एनसिबी ले मंगलबार सुशान्तकी प्रेमिका रियालाई हिरासतमा लिएको हो ।
भारतीय मिडियाका अनुसार मंगलबार रियाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । जसमा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । रियाले आफूलाई छुटाउन तत्काल जमानतको अपिल गर्न सक्छिन् । तर, एनसिबी उनको जमानत नगराउने पक्षमा छ । यसको निर्णय अदालतबाट हुनेछ । जमानत रद्द भए रियालाई थप अनुसन्धानका लागि जेल पठाइनेछ ।
यदि रियाले जमानतका लागि अदालतमा अपिल नगरे उनी एनसिबीको नियन्त्रणमै रहने छिन् । जमानत मिलेमा घर जान सक्छिन् । एनसीबीले उनलाई प्रहरीको हिरासतमा नभई १४ दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न माग गरेको थियो भने रियाको वकिलले भने जमानतमा रिहा गर्न माग गरेको थियो ।
सोमबार रियाका भाइ सोविक चक्रवती र सुशान्तको घरका म्यानेजर सामुअल मिरान्डासँग पनि एनसिबीले बयान लिएको थियो ।
दुवै अहिले एनसिबीको हिरासतमै छन् । सोमबार रियाले एनसिबीसमक्ष आफूले लागुऔषध कारोबार गरेको स्वीकार गरेकी थिइन् । उनले सुशान्तकै निर्देशनमा सबै काम गरेको बताएकी थिइन् ।
यसैबीच, सुशान्तकी बहिनी प्रिया सिंहले वान्द्रा प्रहरीमा रिया र दिल्लीको राममनोहर अस्पतालका डा.तरुण कुमारविरुद्ध एफआइआर दर्ता गरेकी छिन् ।
प्रियाले दर्ता गरेको एफआइआरमा व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न उक्साएको र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न बाध्य पारेको जनाएकी छिन् । डा. तरुण कुमारले परिवारको सल्लाहविना केवल रियाकै निर्देशनमा सुशान्तलाई ‘डिप्रेसन’को औषधि दिएको आरोप सुशान्तकी बहिनी प्रियाले लगाएकी छिन्
बेलबारी, २५ पुस । बेलबारी फुटबल क्लबको आयोजनामा भएको स्व. संजोक स्मृति नकआउट फुटबल प्रतियोगिता
प्रदेश १ मा १९ जना कोरोना संक्रमित थपिए : ५१ जना डिस्चार्ज
विराटनगर, २४ पुस । प्रदेश १ मा आज १९ जना कोरोना संक्रमित थपिएको छ ।
मोरङ, १९ पुस । बेलबारीमा जारी स्व. संजोग स्मृति नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको चौथो दिनको खेलमा